Sikulethela iresiphi ngokungavamile esihlwabusayo ziyadliwa amakhukhi. Lokhu uju ngokuphelele efanelekayo itiye noma ikhofi. ziyadliwa shortbread yethu ikhukhi iresiphi akunzima kakhulu, efana izindondo nati. Siyabonga ekukhishweni yokuqala, ukuma ezithakazelisayo futhi ukunambitheka enkulu, ngeke ukwanelisa ngisho olindele kunazo izinyo elimnandi, kanye nokuntuleka ufulawa wokudla kuzokwenza kube lusizo kakhulu ngokuya yokudla ukudla okunempilo.
Isisekelo inguqulo lula
Ngu ebhekisela amakhukhi sifana ngibhema amasosishi ngakho kwezinye imithombo ibizwa ngokuthi isoseji amabhisikidi noma amakhukhi kusuka log.
Ukuze bakwazi ukuthatha iresiphi ikhukhi nut kusuka Julia Vysotsky. Ilungiselela amakhukhi nezincomo zayo, sebenzisa it njengoba isisekelo lwamakholi, okuzokwenziwa uthathe izindondo.
Ukuze ziyadliwa amakhukhi Julia Vysotsky kumelwe athathe ingilazi kafulawa uhlanganise ne isipuni se-baking powder. Kwenye indishi kumele ugaye engamakhulu amagremu ibhotela eziyikhulu namashumi ayisihlanu amagremu ushukela. Ukwengeza ezine wezipuni ubisi olufudumele kanye vanilla kancane. Govuza.
walnuts yashaywa (noma iyiphi enye) nuts ayifake ingxube uwoyela. Kukhona futhi Seva ufulawa baking powder. ashukumise kanjani. Ifomu amabhola amancane futhi wababeka eligcotshisiwekuhovini baking sheet. Bhaka kuhovini oshisayo kakhulu imizuzu eyishumi.
Ezinye Confectioners bakholelwa ukuthi Wabasaqalayo angasebenzisa ngomumo eyenziwe khekhe izitolo inhlama crumbly nati ezifana "weJubili" noma yimuphi omunye. Ekwakhiweni kulokhu idinge kuphela pecans nalabo izithako ukuthi zifakwe ukwakheka esibophezelayo.
Kulandzelana kwalokucuketfwe lokuhleliwe ukulungiselela
Sinikeza master eziyinkimbinkimbi indlela, kodwa kuyathakazelisa kakhulu, ngoba ekhaya yokupheka - uhlobo yokuzilibazisa. Ngaphezu kwalokho, ziyadliwa yethu amakhukhi ngaphandle ufulawa. Indlela ngeke sijabulise nalabo ahlale edla ukudla gluten-free.
Ukulungiselela izindondo eyenziwa ngezigaba ezine:
Bhaka Peanut Amakhukhi (iresiphi uzonikezwa ngezansi).
Ukwenza yasibamba noma ngibopha unama.
Guqula izingxenye ukulungele kwilogi, bese kwenzekani - in-the izindondo amakhukhi.
Yenza khekhe shortcrust
Ukuze izibiliboco enkulu kufanele bazikhandle. Awudingi ukuba lula ubuchwepheshe, hhayi umuntu baking cookies, iqebelengwane laba linye lonke. Kubalulekile amakhukhi nut (iresiphi ngezansi) waba shades ukuhluka kanye ukuthungwa. ikhekhe elikhulu kuyoba eyohlobo ezingaphezu kuka liyadingeka.
Ngakho, ukwenza amakhukhi nut. Indlela kusikisela ukuba khona corn isitashi, imajarini, ushukela, vanilla, amaqanda ufulawa alimondi.
imajarini Isigamu upaka efiselekayo kancane ukuthambisa ekamelweni lokushisa, aqotshwe ngommese. Khona-ke kufanele ayifake isitsha esikhulu uhlunga ezimbili izinkomishi ngesitashi. Potato ngeke isebenze! Kukhona futhi uthele isigamu inkomishi ufulawa alimondi, 10 amagremu of vanilla ushukela, nendebe ushukela beat amaqanda amabili.
Lokwela, kodwa hhayi izandla zakhe, isiyaluyalu kuze isimo homogeneity okunemibandela. Kusemqoka ukuthi izithako ucishe ngokulinganayo basakaza kulo inhlama. Asikwazi ukuvumela a ukufana okuphelele nokonakala fat. Bese ulandela ifomu com, bopha e epulasitikini bese efakwa endaweni epholile ingxenye yesine ihora. Uma ucabanga ukuthi ebilayo inhlama ke uyibambe esiqandisini isikhathi eside.
Bhaka khekhe billet
Inhlama selehlile is abeke etafuleni, isitashi priporoshonny. Roll umphetho ukujiya kwelinye-isigamu isentimitha. Sika zibe yizicucu yanoma iluphi kanye nosayizi - ke kusadingeka ukuba aphule. preform Dlulisa-ikhukhi bayobhaka Teflon iphepha phansi (ngoba uyozishisa).
Beka baking kuhovini oshisayo. isikhathi Baking - a ngekota yehora. Ukuzimisela iyenziwa ngenduku sokhuni. Uma ukubhoboza akuyona ikhukhi ke wanamathela test, khona-ke usulungile. Amakhukhi angase asuswe futhi selehlile. Nakuba ayaphola, isikhathi sokuya nati yasibamba nokunamathisela.
pecans shelled kanye ngodonga kufanele oqoshiwe ngommese. Usayizi elikhulu izingcezu - imbewu emhlophe. Bathi akwenzeki eziningi nati. Uma ethatha elilodwa noma amabili izinkomishi, awusebenzi konakalisa ikhukhi lethu iresiphi. Walnut POLENOV isimangaliso bazuze kuphela ukusuka kulo. Kodwa noma kunjalo zizongena kanye walnuts.
Nuts kufanele luvutha phezu kwesitofu endaweni Skillet cast iron. Badinga ugovuze sonke isikhathi. Ubude epanini yokuwugazinga luncike lokushisa kanye nenani namantongomane. Kubalulekile ukuthi ziba kancane egolide, kodwa hhayi wokushiswa. On ukushisa eliphezulu ne eshukumisayo eyingqabavu, imizuzu engaphansi kwemihlanu. Ukulungele uthele le nati kusukela pan futhi kuphole ngokwemvelo.
Uma, esikhundleni ikhukhi mathupha okulungiselelwe ungasebenzisa esitolo, kuya yasibamba ka emulsion kuyomelwe baye ngokucophelela. Ukuze lokho kuzodinga zemvelo ogayiwe shokolethe kusukela cocoa, ubisi wafingqa brandy ezinhle.
Konke lokhu izakhi - eziyikhulu amagremu of ushokoledi ochotshoziwe, nophiso ubisi olujiyile ne amabili kuya kwamathathu wezipuni nogologo - Kumele uxhumeke endishini enkulu ugovuze nge mixer. Khona-ke kufanele ubeke isitsha endaweni okugeza amanzi nobhebhezela njalo alethe esimweni a emulsion eyohlobo.
Thina yakha okhunini luwuphendule izindondo
Amakhukhi selehlile kumele kuphihlizwe bese Roll pin rolling kubo. Kufanele uvule hhayi ingane incane kakhulu, ubukhulu izingcezu nut. Nuts isihlabathi namatshana ezidingekayo uthele endishini emulsion yasibamba futhi isiyaluyalu. Isisindo umphumela ukudla ukuba agqoke ifilimu futhi ukwakha log, esigabeni cross likhula libe amasentimitha. Imikhawulo kumele kwenziwe njengoba flat ngangokunokwenzeka.
Beka lwamakholi wesiqandisi amahora ambalwa. Kufanele kube nzima kangaka, ukuthi kungenziwa kalula ukusika. Kakhulu akudingeki ukuba simisiwe. lwamakholi eqina isuswe, ukwandisa futhi ukusika crosswise zibe yizicucu alinganayo kancane ngaphezu isentimitha obukhulu.
I kwaphumela shift izindondo ephepheni coasters nge imiphetho ezifincizekile ezifana nezimpiko noma perforated. Uqedile!
Inyama ku-microwave - ukulungiselela eyosiwe
Kuyini degree of yokuwugazinga inyama? Indlela bakuchaza?
Mackerel abilisiwe: indlela yokwenza isaladi aphume ke kwesokudla
Kanjani ukwenza iklabishi pickling
Kuyini baking powder
Vaz 21012 - imoto nge twist
Kuphi e Nizhny Novgorod: Owesifazane nengane kanye izivakashi
Ukudla okukahle uma amakati: Indlela Yokukhetha
Yiziphi imifula emikhulu eRussia?
Ecindezelekile - ke ... Definition of imiqondo kanye nezindlela ekuxazululeni ingxabano yangaphakathi
Yini odokotela baye medknizhki? Ukubhalisa izincwadi eziphathelene nokwelashwa kwazo ziyimfihlo
Amaphuzu konakalise umbono?